Ukuvavanya i-Kodak EasyShare M341 - Geofumed
Ukuvavanya i-Kodak EasyShare M341
Matshi, 2010 Uhambo
Emva kokulahleka okungenakulinganiswa kwaBenq wam, ngokuqinisekileyo Gracioso uyonwabela ngeendleko zokungakhathali kwam, ndaya kwindlela encinci yokufumana.
Inomdla njengoko le nto yokudlala engadluli i-US $ 150 yenza iimangaliso zayo. Ngokuqhelekileyo, phantse nje nayiphi na ikhamera yalezi zihlandlo, kunye nesiqingatha semali ye-Sony kunye ne-MemoryStick ecasulayo. Oku kuxhasa i-SD.
Isigqibo: 12.2 Mega pixels. Okwaneleyo, nabani na onokubaluleka kancinci kangaka, kodwa kubonisa umahluko xa uthatha iifoto nge zoom zoom ezininzi kwaye wenze ukucima kweendawo ezincinci.
Umtsalane kwi-panorama: Kulungile, akusiyo imanyano elula yeefoto eziqhubekayo, kodwa yenza uhlobo lokuthotywa kwezilwanyana emva kokutshintsha kwetoni akunjalo. Lo ngumzekelo weGulf of Fonseca, kwiCentral American Pacific, inguquko enokuthi ingaba ndikhumbula ukuba ukukhanya kukubandezeleke kumgama ongenakukwazi ukuwubona.
Jonga lo mdlalo, nangona ungabonwayo, ulungele ukudibanisa utshintsho. Oko kwathathwa yintombi yam.
Thatha uhambo: Kwivili lokufikelela ngokukhawuleza, unokhetho lokufakela kwijubane lesantya, udutshulwa ukuhamba kwekhamera, ukufakwe kwevidiyo. Khangela lesi sithombe esithathwe kwisithuthi:
Uyabona ukuba ulwakhiwo luhlala lubukhali. Akulona umlingo wekhamera, yimixiksi ye-12 Mega.
Lona ukuphuma kwelanga kwiveki engcwele yeQuimistán Valley, eHonduras. Ngaphandle kokusondeza, ilanga lingeke libe kulolo hlobo.
Kwaye, ukuba uqhube imoto, akukubi nakwezinye.
Isithombeni sinokulawulwa kwimiqathango yesibini kwisithathu, kodwa ngaloo ntsasa i-valley yayiyi-chulada, njengokungathi ikhuthaze nayiphina i-geofumada ukuze igawule imilenze kunye noDkt Gray's scalpel.
... ukuba uyingekho
into engaphantsi kwesithunzi sam ...
Kodwa kungekhona namhlanje ... Ndineentsuku ezimbini ukusuka kwiholide.
Kwaphela: Iimpawu eziqhelekileyo eziye zazisa zonke izinto, ezifana nesisombululo esiphezulu samaxwebhu, iifoto zokushona kwelanga, izinto zokukhanyisa, ukukhanya kwekhandlela, abantwana abadlala ngokukhanya okukhanyayo, ngaphakathi kwimyuziyam, ekhanyayo elunxwemeni, ekhanyayo kwiqhwa, ngokuzenzekelayo, izinto ezikufuphi, izixhobo zomlilo , njl
Ngokomzekelo, abafana, baxakekile ukuba i-turtle iSebastian yafa. Omnye ubusuku obubuhlungu, senze ikhefu eliqinileyo, kwaye ngaphandle kwemigaqo eninzi saliphonsa emlambo ukusuka kwibhulorho.
Post edlulileyo«Edlulileyo Izikhombisi zeempawu ze-7 Geofumed
Post Next Faka i-WordPress, phambi kwemizuzu ye-5Okulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "Ukuvavanya i-Kodak EasyShare M341"
Andiyidanga, nditshontshile ikhamera yakho ukuba ndiyondle abantwana bam ngemali endikuyo ukuyifumana.